Posted by Yasmin Ahmed on July 18, 2019 in Holy Quran | 4 Views | Leave a response
Somaliland oo si kulul uga hadashay guddigii uu magacaabay madaxweyne Farmaajo
Image captionFarmaajo iyo Biixi
Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa “gef siyaasadeed” ku tilmaantay tallaabadii uu Arbacadii madaxweyneyaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku magacaabay guddiga dib u heshiisiinta iyo wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland.
War-saxaafadeed maanta kasoo baxay Somalialand oo uu ku saxiixnaa Af-hayeenka Madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa si caro l eh looga hadlay arrintaas, waxaana lagu cambaareeyay qaar ka mid ah erayadii ku jiray wareegtadii madaxweyne Farmaajo.
“Waxa wanaagsan in qofka masuulka ah carrabkiisa iyo camalkiisu is waafaqaan, tan iyo intii maamulka Farmaajo talada dalkaasi Soomaaliya qabtay, waxa uu Jamhuuriyadda Somaliland kusoo qaaday weerar siyaasadeed, dhaqaale, bulsho, iyo mid Diblomaasiyadeed iyagoo meel kasta oo ay Somaliland ka hesho taageerada mashaariicda horumarineed, maalgelinta marsada Berbera iyo iibka xoolaha Somaliland-ba ku ah duulimaad. Sidaa awgeed isma qabanayso ficilladaada cadowtinimo iyo tiraabta weedha WALAALAHEENNA SOMALILAND. Taasi waa Ilmadii Yaxaaska”, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka oo nuqul ka mid ah lasoo gaarsiiyay BBC-da.
Qoraalka oo lasii waday ayaa sidoo kale lagu yidhi: “Jamhuuriyadda Somaliland tabashadeeda iyo dhibtii soo gaadhay waxay kaga garnaqsan kartaa oo keliya fagaare caalamiya oo bulshada caalamku ay goob-joog ka tahay balse maamulka cadawga ah ee farmaajo xalin tabasho nagama dhaxayso, ee garnaqsi laba dal ayaa noo dhexeeya. Caqliga saliimka ahina dhigimaayo in cadawgaagu ku waydiiyo tabasho, balse wuxuu ku farayaa in layska celiyo”.
Mas’uuliyiinta Somaliland ayaa war-saxaafadeedkan ku sheegay in wadahadallada dhex mari kara labada dhinac ay noqonayaan oo kaliya kuwo ay beesha caalamka garwadeen ka tahay.
Image captionMadaxweyne Muuse Biixi ayaa horay uga hadlay wadahadallada labada dhinac
Dhanka kale waxaa lagu muujiyay caro ku aaddan qodob ku jiray wareegtadii madaxweynaha Soomaaliya, kaasoo taabanayay hannaanka federaalka.
“Jamhuuriyadda Somaliland ma quseeyo hawlaha Federal-ku, dib u xasuuso taariikhda 1960-kii waxaynu ahayn laba dal oo kala madax bannaan caalamkuna aqoonsan yahay, islamarkaana ku midoobay baadi-goobka shantii Soomaaliyeed, balse 1991-kii midowgaasi wuu burburay, illaa 1991-kiina waxa aynnu nahay laba dal oo kala madax-bannaan, waxana tihiin Federal-ka Soomaaliya, annaguna waxannu nahay Jamhuuriyadda Somaliland, idinka ayuu Federal-ku gaar idiin yahay”.
“Sidaa daraadeed, magacaabidda guddidaas waxa ka muuqda gef siyaasi ah, Somaliland-na wixii gudaheeda ah iyadaa dhammaysata, cadowgeedana waxa ay u jawaabtaa iyada oo midaysan, muwaaddinka Somaliland-na kama suurowdo inuu gadhwadeen u noqdo cadowga dalkiisa”.
Lahaanshaha sawirkaOFFICE OF SOMALILAND PRESIDENT
Image captionSomaliland ayaa dadaal ugu jirta sidii ay aqoonsi buuxa ku heli lahayd
“Haddaba, Wada-hadallada Somaliland iyo Soomaaliya waxa ay qabsoomi karaan keliya marka ay Soomaaliya garwaaqsato in midnimadii labada dal ay burburtay 1991-kii, illaa maantana aynu nahay laba dal oo kala madax-bannaan muddo 28-sanno ah jaarnimo kaliya wadaaga”, ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedka kasoo baxay madaxtooyada Somaliland.
Maxay ahayd magacaabistii madaxweyne Farmaajo?
Image captionFarmaajo ayaa shaaciyay magacyada guddiga qaran ee wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Arbacadii wareegto ku magacaabay Guddiga Qaran ee Dhab-u-heshiisiinta iyo Wadahadallada Dowladda Federaalka iyo Soomaaliland.
Somaliland oo su’aal gelisay mustaqbalka wadahadallada Soomaaliya
Image captionGuddiga la magacaabay ayaa laga dhowrayaa inay keenaan xal waara
Maxaa xigi doona digniintii ay beesha caalamka u dirtay dowladda Somalia?→
Boqor Salman oo lagu sameeyey qalliin looga saaray xameetida 2 Saac ka hor→
Daawo:Madax-dhaqameedka & Cuqaasha Beesha Ciise oo ka hadlay Doorashooyinka 2020-ka,Saamiqeybsiga & Arimo kale oo xasaasiya→